News – Page 2 – Puntland Voice
Taliyaha Booliska Soomaaliya Jeneraal Bashiir iyo danjire Keating oo gaaray Gaalkacyo
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa goordhowayd gaaray wefdi uu hoggaaminayo Taliyaha Booliska Soomaaliya Jen. Bashir Cabdi Maxamed. Wafdiga Taliyaha Booliska ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah Ergeyga gaar ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya danjire Micheal […]
Beelo Walalo ah oo heshiis uga bilawday degmadda Qardho
Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxaa saakay ka furmay Shirweyne dib u heshiisiin oo lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah oo mudooyinkii ugu dambeeyay ay diriri ku dhex maraysay degaano ka tirsan gobolka Karkaar. Gogosha nabadeynta beelahan walaalaha ah ee […]
Nabaddoon Abukar Nabadoon Abdi Xaashi Jaamac Cadceed oo lagu caleema saaray magaalada Gaalkacyo.
Nabaddoon Abukar Nabadoon Abdi Xaashi Jaamac Cadceed oo lagu caleema saaray magaalada Gaalkacyo. Xaflad aad u heer saraysa oo lagu caleemo saarayo, nabadoonka ayaa lagu qabtay Gaalkacyo iyadoo Caleema saarka nabadoonka ay ka soo qayb Galeen isimo, iyo waxgaradka Gobolka […]
Madaxweynaha Dowladda Puntland ayaa magaalada Brussles Kulan Kula Qaatay Ambassador ka Sweden Ee Africa.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku Sugan magaalada Brussels ee dalka Belgium,ayaa maanta oo taariikhdu tahay 17 July 2018 kulan gaar ah la qaatay Ambassador ka Sweden Ee Africa Helena Grondahl Rietz. Kulanka uu Madaxweynaha Dawladda […]
CIIDANKA DIFAACA PUNTLAND OO MADAAFIIC KU GARAACAY FARIISIMAHA CIIDANKA SOOMALILAND
Ciidanka daraawiishta dawladda Puntland ayaa hubka culus ee madaafiicda ku garaacay fariisimaha ciidanka soomaliland ku leeyihiin deegaanka tukaraq ee Gobolka sool, waxaa halkaas ciidamda soomaliland ka soo Gaaray, khasaare isugu Jira, naf iyo Maalba iyagoo baabuur tigniko ah laga gubay […]
Baabuur iyo Ciidan ka soo Goostay Maamulka Soomaliland
Gaarigii uu Ciidanka Booliiska Laascaanood kala soo baxsaday C/risaaq Aadan Geele oo Magaaladda Garoowe soo gaaray. Gudoomiyaha Sool ee dhanka Puntland C/laahi Aadan Geele oo Darawalka gaariga la soo fakaday ay walaalo yihiin iyo Gudoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar Faraweyne ayaa […]
Madaxweyne Farmaajo ayaa gaaray magaalada Jabuuti halkaas oo uu ka furmay Shirka Madasha iskaashiga Afrika iyo Shiinaha.
Shirkan oo soconaya inta u dhaxaysa 5-7 bishan Luuliyo ayaa looga wada xaajoonaya hirgelinta ganacsiga xorta ah ee Qaaradda Afrika, xoojinta maalgashiga, kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xaqiijinta hiigsiga horumarineed ee 2030-ka ee ajendaha caalamiga ah. Dhanka kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa […]
Mucaaradkii hubeysnaa ee Itoobiya oo ONLF iyo Ururo kale ay ka mid yihiin oo maanta laga saaray liiska Argagaxisada:
Baarlamaanka Itoobiya ayaa fadhi deg-deg ah oo maanta ay yeesheen ku ansixiyay Qaraar golaha wasiirrada dalkaas ay baarlaaanka u soo gudbiyeen, kaasoo dhigayay in liiska argagixisada laga saaro ururada hubeysan ee mucaaradka ku ahaa dalkaas. Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Itoobiya ayaa […]
hirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo uu Shir-Guddoominayay Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa looga hadlay arrimaha kala ah amniga dalka,
S shilalka gaadiidka iyo khasaaraha ka dhasha iyo warbixino kale. Xaaladda Amniga Dalka: Golaha Xukuumada Dawladda Puntland oo si xeel dheer uga faalooday amniga dalka ayaa sheegay in guud ahaan dalku nabad yahay, isla markaana waxay golahu cadeeyeen inay fashil […]
Gudoomiyihii degmadda Baardheere oo Xilkii laga qaaday
Wareegto kasoo baxdey xafiiska Wasiir ku xigeenka Arrimaha gudaha ee Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa xilka lagaga qaadey mudane Cabdullaahi Nuur Xasan (Cadow) oo ahaa gudoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo . Isla wareegtadan ayuu wasiir ku xigeenku ku […]
« Previous 1 2 3 4 … 1,022 Next »